Not Based on the Doctrine
There is no connection between what they are doing and the Doctrine of Theravada Buddhism. What they are doing is horrible. What they are doing is instance of trible violence. The conection to religion is there because the difference between Buddhists and Muslims defines in turms of religoin. But this is tribalism. It is xinophobia. It is hatred of the other. But it is not catched out by the Doctrine of Buddhism.
သူတို့ ပြောပုံ - ၁၀
သူတို့ (မြန်မာတို့) လုပ်တာနဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဓမ္မ ဆက်နွယ်မှုမရှိပါဘူး။ သူတို့လုပ်တာက ထိတ်လန့်စရာပါ။ ဒါလည်း လူမျိုးစုအကြမ်းဖက်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနဲ့ ပတ်သက်တယ် ဆိုတာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူဆလင်တွေအကြား မတူကွဲပြားတာကို ဘာသာရေး အမည်တပ်ပြီး ပြောဆိုကြလို့ပါ။ အမှန်တော့လူမျိုးစု ပြဿနာ၊ ပြင်ပက ၀င်လာသူတွေ အပေါ် စိုးရိမ်တာ၊ အခြားတစ်ယောက်ကို မုန်းတီးတာတွေပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီ (အမုန်းတရား)ကို ဗုဒ္ဓဓမ္မမှာရှာတွေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(တွေ့ဆုံခန်းတစ်ခုမှာ တူရကီလူမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသား Chenk Uygerက မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓ၀ါဒီတွေက မူဆလင်တွေကို လူမျိုးတုံးသတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး "ယုံကြည်မှုရဲ့ နိဂုံး The End of Faith" စာအုပ်ကို ရေးသူ Dr. Sam Harrisပြောတဲ့စကားပါ။ Google မှာအဲဒီလူတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ရှာပြီး You Tube မှာကြည့်ရှုနားထောင်နိုင်ပါတယ်။)
.. Pity and need
(The Light of Ashia, p.93.)
သူတို့ ပြောပုံ - ၉
.. အကြင်နာနဲ့ လိုအပ်မှုဟာ
လူအားလုံးကို ဆွေမျိုး ပြုရဲ့။ တစ်ရောင်တည်းရှိတဲ့ သွေးမှာ
ဇာတ် မရှိ။ အားလုံး ငန်တဲ့ မျက်ရည်မှာ ဇာတ် မရှိ။ လူဟာ
နဖူးမှာ တိလကဇာတ်မြင့်မှတ် ခတ်နှိပ်ပြီး လည်ပင်းမှာ
မျိုးမြတ်ချည်နဲ့ မွေးလာခဲ့တာ မဟုတ်။ ကောင်းမှု ပြုသူဟာ
နှစ်ကြိမ်မွေး ပုဏ္ဏား၊ မကောင်းမှု ပြုသူက ယုတ်နိမ့်သွားမြဲ။
Times to be Rich
I'm going to bearich man when this war is over, Scarlett, because I was farsighted – pardon me, mercenary. I told you once before that there are two times for making big money, one in the up-building ofacountry and the other in its destruction. Slow money on the up-building, fast money in the crack-up.
(Gone with the Wind, Chepter XIII, pdf online)
သူတို့ ပြောပုံ - ၈
စကားလက် .. ဒီ ပြည်တွင်းစစ် ပြီးရင် ကျုပ် သူဌေး ဖြစ်တော့မယ်။ ကျုပ် အမြင်ကျယ်လို့။ ရှင်းရှင်း ပြောရင် ကြေးစား ဆန်လို့ပေါ့။ ကျုပ် အရင်တစ်ခါ ပြောဖူးပါတယ် .. လူတစ်ယောက် သူဌေးဖြစ်ဖို့ အချိန် နှစ်ချိန် ရှိတယ်၊ တစ်ချိန်က တိုင်းပြည် တည်ထောင်တဲ့ အချိန်၊ တစ်ချိန်က တိုင်းပြည် ပျက်တဲ့ အချိန်လို့။ တိုင်းပြည် တည်ဆောက်တုန်းမှာ သူဌေးဖြစ် နှေးတယ်၊ တိုင်းပြည် ပျက်တုန်းမှာ သူဌေးဖြစ် မြန်တယ်။
(စကားလက်ကို ကြေးစား သူဌေးပေါက်စဘတ်တလာ ပြောတဲ့ စကား)
5 Wishes of King Bimbisāra
The king (Bimbisāra) had made five wishes
1. ThataBuddha might appear in his reign;
2. That he might see him;
3. That he might learn the truth from him;
4. That he might understand it;
5. That he might follow his commandments.
(Rock Hill, The Life of the Buddha, p. 42.)
သူတို့ ပြောပုံ - ၇
ဗိမ္ဗိသာရ ဆုတောင်း ၅-မျိုး
မင်းကြီး (ဗိမ္ဗိသာရ) သည် ဆုတောင်းငါးမျိုး ပြုထား၏။ ယင်းတို့မှာ ..
၁) မိမိ၏ နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ ဗုဒ္ဓတစ်ဆူ ပွင့်ထွန်းပါစေ။
၂) ထိုဗုဒ္ဓအား ဖူးမြော်ရပါစေ။
၃) ထိုဗုဒ္ဓထံမှ သစ္စာ တရားကို နာယူရပါစေ။
၄) ထိုသစ္စာတရားကို နားလည်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။
၅) ဗုဒ္ဓ၏ သင်ကြားချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ။
(ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်စဉ် တိဗက်မှတ်တမ်းများ၊ စာ - ၈၁)
"Treat others as you would wish to be treated yourself" or "Do unto others as you would have them do unto you."
When it comes to avoinding harful actions of body and speech, in addition to this fundamental rule, I personally findalist of six principles fromatext by the second-centruy Indian thinker Nagarjuna to be helpful. The six principles are as follows:
Uphold the principle of right livelihood.
Ensure that one's body, speech, and mind are nonviolent.
Honor those worty of esteem, such as parents, teachers, and those who are kind.
(H. H. The Salai Lama, Beyound Religion, p. 106.)
သူတို့ ပြောပုံ - ၆
"သင် ပြောဆိုဆက်ဆံ ခံလိုသည့်အတိုင်း သူတစ်ပါးအား ပြုမူဆက်ဆံပါ သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးအား သင်က ပြုမူစေချင်သလို သင်က သူတစ်ပါးအား ပြုမူပါ"။
(သူတစ်ပါးအား) နာကျင်စေသည့် ကိုယ်နှုတ် အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်ရာ၌ ဖော်ပြပါ ရွှေမျဉ်း အပြင် အေဒီ နှစ်ရာစု အိန္ဒိယ တွေးခေါ်ရှင် နာဂရဇ္ဇုန၏ ကျမ်းစာမှ စည်းမျဉ်း ခြောက်ခုလည်း အသုံးဝင်မည်ဟု ကျွန်ုပ် ယူဆ၏။ ယင်းတို့မှာ ..
သေရည်ယဇ်မျိုး သောက်သုံး ကြူးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
သက်မွေး ၀မ်းကျောင်း မှန်စေရန် ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းပါစေ။
ကိုယ် နှုတ် နှလုံး သုံးပါး၌ မကြမ်းတမ်းမိဖို့ သေချာပါစေ။
သူတစ်ပါးတို့အား လေးစားစွာ ဆက်ဆံပါ။
လေးစားထိုက်သည့် မိဘ ဆရာသများနှင့် ကြင်နာတတ်သူများအား ဂုဏ်ပြု ပူဇော်ပါ။
(တိဗက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမား)